Gar-gaar la siiyey 1000 qoys oo ku guryo waayey dab qabsaday Kaam ku yaala Galkacayo (Sawirro) – Radio Daljir
Gar-gaar la siiyey 1000 qoys oo ku guryo waayey dab qabsaday Kaam ku yaala Galkacayo (Sawirro)
Agoosto 27, 2013 6:35 b 0
Galkacayo, August 27, 2013 – Waxaa maalintii labbaad gubanaya qeybo ka mid ah Kaamka Buulo-Kantarool ee magaalada Galkacayo, halkaas oo dab qabsaday shalay, dabka ayaa geystay khasaare dhanka Hoy-ga ah.
Dabkan khasaaraha geystay ee ka socda Xerrada dadka danyarta ah ee Gaalkacayo, ayaa la soo sheegayaa in uu ka dhashay mid ka mid guryaha cooshada ah oo gubtay, taas oo sabab u noqotey in ay bas-beelaan guryo kale.
Maamulka Galkacayo ayaa maanta Kaamka gaarsiiyey Gar-gaar aan? badnayn oo isugu jira Rooti iyo Buskud, ?loogu talo-galay dadka guryo beelay in ay nolosha ku maareeyaan inta maanta ah.
Duqa Galkacayo Axmed Cali Salaad wuxuu ugu baaqay Hay?adaha wax bixiya in ay gurmad la soo gaaraan dadka ku nool Kaamka buulo-Kantarool, halkaas oo ay degan yihiin ilaa 1000 (Kun qoys) oo ku guryo beelay dab shalay ka kacay Kaamka.
Qoysaska degan Kaamka ayaa intooda badan waxay yihiin dad ku tiirsan xooggooda iyo shaqooyin yar yar oo ay ka qabtaan magaalada, marka laga yimaado khasaaraha dhanka Hoy-ga ah ee dadkaas haleelay, ma jiro khasaare nafeed oo dabku geystay.
Baaritaano hub sharci darro ah lagu baadi-goobayo oo maanta ka socda xaafadaha Kismaayo